Ukuzibulala kweCallcenter | Martech Zone
NgoLwesibini, Januwari 15, 2008 NgoMvulo, Julayi 11, 2016 Douglas Karr
NgoMgqibelo, sisebenze neziko lokufowuna kwaye omnye wabathengi bethu. Ndandinaloo fuzzy, i-gut ndiziva ukuba ayizukuhamba kakuhle. Amathumbu am ebenyanisile.
Ngelixa isicelo sethu sasigqityiwe kwaye nezixhobo zihleli zingenzi nto iinyanga, i-callcenter ayikhange ichukumise nto. Besinedemo kwaye kuboniswe kuphela umphuhlisi wabo. Umthengi ubize umnxeba obuza umnxeba kwaye wabuza ukuba yintoni efunekayo ukuze ulungele. Simeme umnxeba kwi-callcenter ukujonga ukuba bakulungele na. Qho xa abasebenzi beziko eliqinisekisayo besiqinisekisa ukuba bafuna kuphela iiveki ezimbalwa.
Xa unikwa ixesha kunye nezixhobo, zithathe.
Kwiintsuku ezimbalwa ngaphambi kokuba baphile, bafuna utshintsho kwisicelo ekufuneka sityhobozele kwimveliso. Ngenye imini ngaphambi kokuba siye kuphila, bavavanya kwaye safumanisa imiba nge slam. Sizilungisile emva kwemini.
Emehlweni ethu abaxhasi, ewe, la macala mabini ayedibene. Inyathelo yayiliziko labo lokufowuna + isoftware yethu. NgoMgqibelo sisungule iintsuku ezimbalwa emva kwexesha- kulapho kwaqala khona ulonwabo lokwenyani. Impendulo ekhawulezileyo kweli ziko yayikhohlakele, ingenamsebenzi kwaye icotha - kubaxhasi, hayi kuthi.
Ngokukhawuleza sabiza iintlanganiso ezithile kunye nenkampani kwaye ubumdaka baqala ukubhabha. Iinyanga ezibaleke emva kwesicelo emva kwesicelo sohlaziyo zingahoywa, kwaye kugxilwe kwiziko lemibuzo kukuba imodeli yengeniso yayingasebenzi. Bebabiza i-x / umnxeba- kodwa kuba iifowuni zithathe ixesha elide kakhulu, bazakuphulukana nemali. Babonakalise ukungazi kumthamo oqikelelweyo, bakhalaza ngobunzima bomnxeba, kwaye bathetha ngezimfuno ezingekho ngqiqweni zomthengi.
Ukanti, bavumile kwishishini, bavumile kwimbuyekezo kwaye bavumelane nomda wexesha.
Musa ukukhalaza emva uthi ungaphumeza!
Baye bagqiba kwelokuba bazame ukuphosa bonke phantsi kwebhasi kwaye bakhusele ukungabinakho. Kwakunzima ukuhlala efowunini apho babetyala ngayo yonke into phantsi kwelanga. Ngaphandle kokunganyaniseki okuqhubekayo malunga nengxaki yokwenyani (hayi ukuhlalutya umsebenzi ngaphambili kunye nokulungiselela abasebenzi babo ngokufanelekileyo) bakhethe indlela ephantsi. Okubi nangakumbi, bagqibe kwelokuba bavakalise izikhalazo zabo esidlangalaleni emva ukusilela, endaweni ngaphambi kokuqala. Ukuzikhusela kwabo kokugqibela kwakulula, uqoqosho aluzange longeze. Bebengenzi ngokwaneleyo ukuba bazuze kwifowuni nganye.
I-callcenter kubonakala ngathi iyilibele lonto Iindleko ngomnxeba ngamnye ayizonjongo zomthengi, ingeniso ngomnxeba ngamnye na.
Sisisombululo esilula, akunjalo? Okungcono ukulungiselela abasebenzi bakho, kokukhona baya kuba nempumelelo ngakumbi ekulawuleni umnxeba. Abangcono ekulawuleni umnxeba, kokukhona baya kuthengisa abathengi, bamele ishishini abalisebenzelayo, kwaye ngaphezulu kokukhona baya kuba nakho ukuphuma ngokukhawuleza. Ukuba iifowuni zithatha ixesha elide, umthengi unokuzimisela ukuyihlawula ukuba kukho imali engenayo. Iindleko yingxaki yeziko lemibuzo, unyango luyingeniso engaphezulu.
Sibuze ukuba yintoni esinokuyenza ukunceda. Enye ingcebiso yayikukuongeza ukusebenza okongezelelekileyo kwisicelo. Ngelishwa, ixesha lophuhliso beligqithile njengoko isicelo sasihlala singenzi nto.
Namhlanje, sicime iziko lemibuzo ukunika iqela ixesha elongezelelweyo loqeqesho. Basanyanzelisa imali engakumbi kwifowuni nganye. Kuya kufuneka baqonde ukuba kunokuba kufanelekile ukungqina ukuba ungawenza umsebenzi kuqala ngaphambi kokuba ucele enye imali. Umthengi ubanika ithuba lesibini, andinathemba lokuba baya kulisebenzisa kakuhle.
Sele sisebenza kwezinye iindlela.
tags: ziko lezikoIndawo yokufownelaingeniso ngomnxeba ngamnye
Iiwebhusayithi zinokuqhuba imisebenzi ecwangcisiweyo kunye neCron
Isixhobo, isoftware… iWebhu?
Jan 16, 2008 kwi-9: 13 AM
Uyayithanda lonto. Andikwazi ukukuxelela ukuba zingaphi izihlandlo ezifanayo ezenzeke kum. Uyazama kwaye uzame ukunceda, kodwa ekugqibeleni abafuni koncedo kude kube lixesha elidlulileyo kwaye lidlulileyo ngenxa.
Jan 20, 2008 kwi-2: 35 AM
Iziko lokutsalela umnxeba lifuna kakhulu ingakumbi xa kufikwa kwitekhnoloji. Inkqubo yokwenza isicelo yenye yezinto ezifunekayo…. :)
Lance ye lancecorner.com